Usungule inkampani yokutakula abampofu
UNKK Jabu Ndlovu usomabhizinisi waKwaDukuza osiza abantu emikhakheni eminingi ehlukene ukwenza ngcono impilo. Isithombe: SITHUNYELWE
deli mncwabe | July 4, 2019
AKAFISI ukubona omunye umuntu eswele okuya ethunjini uNkk Jabu Ndlovu osungule inkampani esiza abantu ngamasu okulwa nendlala.
UNkk Ndlovu waKwaDukuza ophinde abe ngusomabhizinisi onenkampani yamakhaza iSenzakonke Funeral Services, uthe imfundiso yabazali bakhe iyamgqugquzela iphinde imexwayise ngokuyekelela omunye umuntu abhuqwe yindlala.
“Ngihamba ezinyathelweni zabazali bami ababelwa bengafuni ukubona omunye elambile. Bangifundisa ukwabelana nabanye abantu ngenginakho. Kulokhu-ke ngabelana ngamasu okuthuthukisa impilo, amaqhinga okuxosha indlala emakhaya nokwenza ngcono isizwe sakithi,” usho kanje.
UNkk Ndlovu ungumsunguli wePoverty Fighters Movement ayisungulele ukusiza abantu ukuze baphumelele kwezamabhizinisi futhi baphunge indlala emakhaya.
“Siphila esikhathini la inqwaba yabantu iswele khona imisebenzi. Uma ungabheka ukuthi abeStatistics South Africa baveze ukuthi isibalo sabantu abangasebenzi sifinyelela ku-27.6% kule kota edlule, uyashaqeka. Lokhu kusinika inselelo yokuthi sizibambe ziqine, sizisungulele thina indlela yokuxosha ikati eziko,” usho kanje.
Echaza ngePoverty Fighters, uthe inezigaba ezahlukene esiza ngazo emphakathini. Isigaba esihamba phambili ngesezigcawu zokwabelana ngolwazi nokubheka amathuba ebhizinisi kulabo abanesifiso.
“Baningi abantu abanesifiso sokungena emabhizinisini ehlukene kodwa ukushoda kolwazi kuyabakhubaza. Uthola ukuthi omunye uyangena kodwa uma engenalo ulwazi, ukweselwa nokwelulekwa ligcina lingaphumeleli. Thina siyamsiza umuntu simcathulise kusukela enephupho, sigcine silenze layimpumelelo,” echaza.
Olunye uphiko ngolusiza ngokweluleka ngemali. Kulolu bafundisa ukonga imali nokuyikhulisa besebenzisa uphiko lwale nkampani olugunyaziwe yiNational Credit Regulator (NCR).
Uveze ukuthi olunye ngolokuhweba.
Uthe baphinde basizane ngokubheka izindlela zokusiza amakhaya abhekwe izaguga nalawo abhekwe yizingane.
“Sinikela ngokudla, sigqokise abaswele lapho kuvela isidingo zalolu hlobo,” ubeke kanje.
UNkk Ndlovu uthe uma isizwe singabambisana kuningi esingakuzuza futhi singakwazi nokukhula njengoba kuvame ukuthi kubonakale kwezinye izizwe.
“Nginephupho lokubona abantu bakithi bekwazi ukusebenza ndawonye ngepumelelo, bekwazi ukusiza la kunenkinga khona. Izinto ezifuze lezi singazinqoba uma singabambisana sifundisane kunokuhlekana ngezinkinga esizazo singabantu,” ephetha.
‘Angifuni ukufana nobaba kaSenzo Meyiwa’
Amadoda abehlomile edlubhe ezabezempilo ashaye achitha nemali yempesheni
Wonani uBheka Mchunu kuKhozi FM?
Uyigwala uManqoba Mngqithi
Uminze bejahwa amaphoyisa